HIVပိုး ကူးစက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ - Hello Sayarwon
HIVပိုး ကူးစက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 09/02/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
HIV ပိုး ကူးစက်ခံထားရပြီ ဆိုတာနဲ့ ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး ဆုံရှုံးသွားသလို မခံစားလိုက်ပါနဲ့။ HIV ပိုး ကူးစက်ခံလိုက်ရပေမယ့်လည်း ဆေးကို သေချာ သောက်မယ်။ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီကနေ အခြားသူကို ကူးစက်နိုင်ခြေ လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ သက်တမ်းစေ့နေနိုင်မှာပါ။
HIV ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဒီစကားလုံးကို ကြားတော့ ကြားဖူးနေပေမယ့် သေချာမသိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ HIV ဆိုတာက ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးပါ။ များသောအားဖြင့်ကတော့ သုက်၊ သွေး၊ နို့ရည်ကနေတတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
HIV ပိုးအဓိက ကူးစက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့
ပိုးရှိမိခင်ကနေ ကလေးဆီကို ကူးစက်တာ စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ပိုး ကူးစက်မှုကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်ပါ။
HIV ပိုးကို ကုသနိုင်မယ့် နည်းလမ်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင် နှစ်တွေ အတွင်းကတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကုသနည်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆေးပညာ တိုးတက်မှုကြောင့် အခုလက်ရှိကာလမှာ HIVပိုး ကူးစက်ခံထားရသူ အများစုဟာ အခြားသူတွေလို သက်တမ်းစေ့စေ့ နေနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ပိုး ကူးစက်ခံထားရသူတွေ အနေနဲ့ Antiretroviral Therapy (ART)ဆေးဝါးကို နည်းစနစ် မှန်မှန်နဲ့ သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် သွေးထဲမှာရှိတဲ့ HIV ပိုးကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်ပေးမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကို ကျန်းမာစေမှာ ဖြစ်သလို ကိုယ့်ဆီကနေတဆင့် အခြားသူတွေဆီ ကူးစက်နိုင်ခြေကိုပါ လျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။
ဆေးကို နေ့တိုင်း မှန်မှန်သောက်မယ်။ ပုံမှန် ဆေးစစ်မှု ခံယူမယ်ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သက်တမ်းစေ့စေ့​ နေနိုင်စေမှာပါ။
ART (Antiretroviral Therapy) ဆေးသောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေ သတိထားပါ။
ကုသမှု မခံယူစဉ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရောဂါတွေ၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေကို သေချာ ပြောပြပေးထားဖို့ လိုပါမယ်။ ပြီးရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာဖို့ လိုပါမယ်။
ဆေးကို နေ့စဉ် အချိန်မှန်မှန် သောက်ပေးပါ။ ဆေးမသောက်မိတာ၊ အချိန်မှန် မသောက်မိတာက ဆေးယဉ်ပါးပြဿနာ ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
ဆေးသောက်တဲ့အခါ ပိုးကောင်ရေ တအားနည်းသွားတဲ့ အခြေအနေ (Undetectable stage) ရောက်သွားတဲ့အချိန်ထိ ဆက်သောက်နေရပါမယ်။ ဆေးရပ်လိုက်လို့ မရပါဘူး။
ART ဆေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ခုနောက်ဆုံးပေါ်ဆေးတွေက ဒီဆိုးကျိုးတွေ နည်းအောင် ထုတ်ထားတာကြောင့် စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ သာမန်အပရိက ဆိုးကျိုးလောက်ပဲ ခံစားရတာပါ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီး သက်သာလာမှာပါ။
ဆေးသောက်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေအကြောင်း ပြသနေတဲ့ ဆရာဝန်ကို သေချာဖွင့်ပြောထားပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုး၊ ဆေးပြောင်းသောက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဆေးသောက်နေချိန်မှာ အခြားသူကို ကူးစက်နိုင်ခြေ နည်းသွားပြီဆိုပေမယ့်လည်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကွန်ဒုံးသုံးပြီး ဆက်ဆံ စေချင်ပါတယ်။ ပိုးက သွေးထဲမှာ တိုင်းလို့မရအောင် နည်းသွားပြီဆိုရင်တော့ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်နိုင်ခြေက မရှီသလောက် နည်းသွားပြီမို့လို့ သုံးခြင်း၊ မသုံးခြင်းကို အဖော်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ကွန်ဒုံးက HIV မဟုတ်တဲ့ တခြားသော လိင်ကတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကိုရော ကိုယ်ဝန်ကိုရော တစ်မျိုးတည်းနဲ့ တားပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ART ဆေးသောက်နေချိန်မှာ အားဆေး နဲ့ အခြားသော ဆေးတွေကို သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါ။
ART ဆေးသောက်နေချိန်မှာ တိုင်းရင်းဆေးတွေ၊ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ အရွက်တွေကို ပြုတ်သောက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
ART ဆေးသောက်နေချိန်မှာ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင်စားပါ။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ။
ART ဆေးသောက်နေချိန်မှာ အရက်သောက်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
ART ဆေးသောက်နေချိန်မှာ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။
HIV ပိုးရှိနေပေမယ့်လည်း ရောဂါပိုးရှိနေပြီဆိုတာကို သိသိချင်း စောနိုင်သမျှ စောစော ART ဆေးကို သောက်မယ်။ အနည်းဆုံး ၆လမှန်မှန်သောက်ပြီးပြီဆိုရင် သွေးထဲမှာ ပိုးက မရှိသလောက်နည်းပြီး သာမန်လူလိုပဲ နေနိုင်မှာပါ။ ဆေးကို ပုံမှန်လေး ဆက်သောက်သွားမယ်ဆိုရင် အခြားသူတွေလိုပဲ သက်တမ်းစေ့စေ့ နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်သလို ကိုယ့်​ကြောင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူတွေကို ရောဂါပိုး ကူစက်ခံရမှုကနေ အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
How Do You Treat HIV? https://www.webmd.com/hiv-aids/understanding-aids-hiv-treatment Accessed Date 19 August 2020
Antiretroviral HIV Drugs: Side Effects and Adherence https://www.healthline.com/health/hiv-aids/antiretroviral-drugs-side-effects-adherence Accessed Date 19 August 2020
What Are Some Tips to Help Me Take My HIV Medication Every Day? https://www.hiv.gov/hiv-basics/staying-in-hiv-care/hiv-treatment/tips-on-taking-your-hiv-medication-every-day Accessed Date 19 August 2020